Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu? Nhoma no, Sɛn na Yɛde Bɛyɛ Adwuma?
BIBLE MU AKORADE Bible Ma Yehu Ɔbea a Ɔyɛ Ɔyere Pa
KRISTOFO ABRABƆ “Wonim Ne Kunu wɔ Kurow Apon Ano”
BIBLE MU AKORADE Ma W’ani Nnye W’adwuma Ho
KRISTOFO ABRABƆ Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu? Nhoma no, Sɛn na Yɛde Bɛyɛ Adwuma?
BIBLE MU AKORADE “Kae wo Bɔfo Kɛse No, Wo Mmeranteberem”
KRISTOFO ABRABƆ Mmerante ne Mmabaa​—Monyɛ Ntɛm Nwura ‘Ɔpon Kɛse’ no Mu
BIBLE MU AKORADE Sulamit Ababaa No​—Ɛfata sɛ Yesuasua ne Nhwɛso No
KENKAN WƆ Abbey Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Bété Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Greenlandic Guarani Guerze Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mende Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kristofo Abrabɔ Ne Yɛn Asɛnka—Adesua Nhoma | November 2016
Dɛn na Yebetumi Asua nhoma no te sɛ Bible Kyerɛkyerɛ nhoma no ara. Yɛde ne nyinaa kyerɛkyerɛ nkurɔfo nokware no. Yɛahyehyɛ Dɛn na Yebetumi Asua nhoma no mu nsɛm te sɛ Bible Kyerɛkyerɛ nhoma no. Nanso Dɛn na Yebetumi Asua nhoma no mu nyɛ den, na emu mfatoho nso da fam. Wɔn a Bible Kyerɛkyerɛ nhoma no mu yɛ den ma wɔn no na yɛayɛ nhoma foforo yi ama wɔn. Dɛn na Yebetumi Asua nhoma no, nkekaho nnim. Nea yɛde asi anan ne “nsɛm bi mu nkyerɛkyerɛmu.” Nsɛmfua ne nsɛm bi a emu yɛ den no, yɛakyerɛkyerɛ mu wɔ hɔ. Dɛn na Yebetumi Asua nhoma no, nsɛmmisa nni eti biara mfiase. Adaka a yɛde yɛ ntĩmu nso nnim. Mmom wohwɛ eti biara awiei a, Bible mu nokware a ɛwom no, wɔabɔ no mmua wɔ hɔ. Yebetumi de Dɛn na Yebetumi Asua nhoma no ama bere biara, te sɛ Bible Kyerɛkyerɛ nhoma no. Sɛ yɛde Dɛn na Yebetumi Asua nhoma no reyɛ Bible adesua a, “nsɛm bi mu nkyerɛkyerɛmu” ne “nsɛntitiriw” afã no, yɛde bɛyɛ adwuma sɛn?
NSƐNTITIRIW: Nnipa pii wɔ hɔ a, sɛ yɛne wɔn reyɛ Bible adesua na yɛkenkan nkyekyɛm a ɛwɔ Bible Kyerɛkyerɛ nhoma no mu na yɛbisa wɔn nsɛm no a, ɛkɔ yiye paa. Nanso yɛmfa no sɛ osuani no nnim akenkan papa anaa ɔnte kasa no yiye. Ɛba saa a, wubetumi de “nsɛntitiriw” a ɛwɔ Dɛn na Yebetumi Asua nhoma no ti biara awiei ayɛ adesua no. Muwie a, na woahyɛ no nkuran sɛ n’ankasa nkenkan eti no mu nsɛm no. Mofa “nokwasɛm” baako biara a, mubetumi de bɛyɛ simma 15 asua. Nsɛntitiriw afã no nkyerɛkyerɛ nsɛm mu nkɔ akyiri, enti wo a woyɛ ɔdawurubɔfo no, ɛsɛ sɛ wusua no yiye paa, na ama woahu nea ɛbɛboa osuani no. Sɛ ɔdawurubɔfo no de eti no yɛ adesua no a, ɛnde obetumi de “nsɛntitiriw” no ayɛ ntĩmu.
NSƐM BI MU NKYERƐKYERƐMU: Nsɛmfua ne nsɛm bi a emu yɛ den wɔ nhoma no mu. Sei na yɛahyehyɛ no wɔ “nsɛm bi mu nkyerɛkyerɛmu” afã hɔ: Eti a edi kan mu deɛ na edi kan, na eti a ɛto so mmienu adi so. Saa ara na wɔahyehyɛ no kosi eti a etwa to. Ɔdawurubɔfo no pɛ a, nsɛm bi mu nkyerɛkyerɛmu afã a ɛwɔ Dɛn na Yebetumi Asua nhoma no mu no, obetumi ne osuani no asusuw ho aka adesua no ho.
KRISTOFO ABRABƆ NE YƐN ASƐNKA—ADESUA NHOMA November 2016